lundi, 07 septembre 2020 15:47
Fantatrao ve: Ohatrinona no tokony saran-dalana taxi-be?
Anisan'ny sehatr'asa betsaka tsy mahafantatra ity resaka fitaterana ity, eny na ireo mitazana avy tety ivelany ka nahita ny firoboroboan'ny varotra sprinter dia tafalatsaka ao anatiny. Ilaina fanaraha-maso be tokoa ny asa, ary dia mila manana fiara hafa anaovana izany, na dia anaovana dépannage sy hanatonana aingana ny fiara raha misy manjo azy, na sanatria misy accident. Matetika heno ny fitenenena hoe, matoa maro mpanao dia bizina mandeha izany, ka vao mahita 40 000 000ar amin'ny asa hafa dia andao hividy fiara anaovana transport. Ny zava-misy, ny fiara tsara dia ampanaovina zotra nasionaly aloha, mazava ho azy, lavitra ny lalana mila fiara tsara. Rehefa vizana avy nanao nationale ny fiara dia ampanaovina régionale, ary rehefa reraka izay vao anaovana taxi-be na hitaomana entana eto an-tanàna, sanatria misy fahavoazana dia mba akaiky eto ihany.
dimanche, 06 septembre 2020 13:28
Vatsy Tsinjo: Misaotra Prezida, nefa...
Somary gaga aho nilazana fa ao anaty lisitra ny anarako, dia nalaina tany amin'ny tompon'andraikitra ny ticket, dia hoe alaina eny Ankatso fanaovam-baolina ny entana. Nanontany azy aho ny masotsivana anomezana ilay Vatsy Tsinjo, dia hoe izay rehetra manana karne dia mahazo avokoa. Betsaka anefa ireo mitaraina fa tsy nahazo, ary ry zareo dia sahirana lavitra miohatra ahy, dia nomeko azy ireo ny ticket ko, dia mandehana alaivo any hoy aho, dia zarainareo mitovy ho anareo. Tonga tany anefa dia niverim-potsiny, tsy nisy filazana, tsy nisy mpizara tonga teny an-toerana, heno fotsiny hoe lany ny entana ka miandry manaraka.Niverim-potsiny ireo nangaina, nanantena ilay vary kely hifampizarana, ka dia nividianako vary nomena andreo, tazony ihany hoy aho ny ticket ka rehefa misy tonga dia alaivo.
Madagascar National Parks (MNP) décide de rouvrir les parcs nationaux sous sa responsabilité après six mois de fermeture pour prévenir la propagation de la Covid-19. La cérémonie officielle pour marquer cet événement se déroulera à Andasibe Moramanga ce samedi à partir de 9 heures. Outre les dirigeants de MNP, hauts responsables ministériels, parlementaires, autorités locales, guides, tours opérateurs, journalistes et autres parties prenantes y assisteront. Cette réouverture vise dans un premier temps les nationaux, notamment ceux en provenance de la capitale « asphyxiée » par les longs mois de confinement.Le relâchement des mesures sur l’axe Antananarivo-Toamasina leur permettra de s’y rendre à leur guise.Les premiers visiteurs internationaux seront attendus en octobre.
jeudi, 03 septembre 2020 07:16
Aoka izay ny fihibohana sy fizarana vatsy tsinjo
Ny mpitondra mihitsy izao no mamory vahoaka, tsy manao takombava orona. Ny aretina voatsabon'ny dokotera malagasy tsara. Ajanony amin'izay ny hamehana ara-pahasalamana sy ny CCO, vatsy tsinjo sy ny politikan'ataka sy mpizarazara fanampiana mitanila sy mampiady, izay mivadika propagandy. Ireo marefo ara-pahasalamana sisa no tokony mbola mihiboka, ny sisa avela hiasa malalaka.
mercredi, 02 septembre 2020 08:39
EPS Bacc: Resa-bola no manahiran-tsaina ny mpampianatra
Nihaona tamin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Elia Assoumacou Béatrice ireo mpampianatra fanatanjahantena. Toherin’izy ireo ny fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta ny alarobia 26 aogositra teo momba ny fanafoanana ny adina ara-panatanjahantena amin’ny bakalorea. Naneho hevitra mikasika izany tamin’ny haino amanjery mbamin’ny gazety ihany koa izy ireo.Resa-bola mifandraika amin’ny tambikarama (indemnités) no fototry ny fanoherana, araka ny fantatra.
vendredi, 28 août 2020 13:17
Mety mahasoa anao: Ahoana ny fikajiana ny lany fanamboarana trano
Ny fananana trano, na hipetrahana na ampanofaina dia mampisy fitoniana ara-tsaina satria manana trano hipetrahana, ary azo lovain'ny taranaka tsy hisedran'ireo zanaka ny fijaliana efa nandalovan'ny tena. Mipetraka avy hatrany izany ny fanontaniana hoe ohatrinona no mahavita trano, ankoatran'ny vidin-tany raha tsy manana lova tany napetraky ny ray aman-dreny. Andao ary ezahintsika kajiana izany amin'ny ohatra, trano misy efitra 3 (Salon + chambre 2) miampy lakozia sy toilettes ao anatiny, rihina iray, mitafo béton dalle eo amboniny (iniantsika tsy atao tafo fanitso, sao mbola ampiakatra rihina any aoriana).
jeudi, 27 août 2020 17:45
Raharahan-tany MBS Anosipatrana: Inona izy io
Ny fanazavana entina eto dia tsy fiarovana an'iza na iza, fa filazana ireo voarakitry ny contrat de bail emphytéotique, na fifanarahana maharitra nisy teo amin'ny MBS sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Samy manana ny mpiaro azy ireo ka tsy hidirantsika ny ady hifanaovana eny amin'ny tribonaly eo amin'ny roa tonta. Ny filan-kevitry ny tanànan'Antananarivo renivohitra nivory ny 08mey - 19 mey, fivoriana ara-potoana, natrehan'ny mpanolo-tsaina 75 tamin'ireo 77 mandrafitra ny filan-kevitra, dia nanapaka ny alatsinainy 08 mey 2000, fa ampanofaina maharitra, bail emphytéotique, amin'ny Malagasy Broadcast Systèm (MBS) ny ampahan-tany an'ny Kaominina etsy Anosipatrana antsoina hoe ANDROROSY. Nanome fahefana ny Ben'ny tanàna ireo mpanolo-tsaina handrafitra ary amoaka fanapahana na arrêté mahakasika izany.
mercredi, 26 août 2020 18:01
Fantatrao ve: Inona no antsoina hoe trosa
Ao anatin'izao hamehana ara-pahasalamana izao, dia naka fanapahan-kevitra ny fitondrana, anampiana ireo mpiasa sahirana misoratra ary mandoa latsakemboka ara-dalàna, heritaona raha kely indrindra, ao amin'ny Cnaps, ny anome vola hindramina, mitovy amin'ny karama raisina iray volana, ary averina mandritra ny 12 volana, manomboka ny 31 janoary 2021. Inona moa ny atao hoe trosa na crédit? Ny teny hoe crédit dia avy amin'ny teny latine hoe "credere" na "croire". Izany hoe ny trosa dia vola omena ny olona na orinasa iray mialoha, izay hipetrahan'ny fitokisana fa amerina sy avoaverina ilay vola araky ny hifanarahana, na ny tetiandro, na ny zana-bola tovanana eo amin'ilay renivola.
mardi, 25 août 2020 12:05
Digitalisation: Masahia manao dingana
Lasa resabe izy ity tato ato. Permis de conduire biométrique, carte grise biométrique, karnem-pokotany digitalisation... Inona tsara moa izany digitalisation izany? Ny digitalisation dia teny angilisy sy frantsay nampiarahana na franglais; ny digit dia chiffre na isa amin'ny teny angilisy.Ny digitalisation izany dia famadihana ireo tahirin-kevitra, sary, feo, soratra, vidéo na signal électrique ho lasa données numériques na antontan'isa, ka ho mora ampiasaina amin'ny solosaina na ordinateur, na fitaovana informatika. Inona no ilana azy? Fahagolan-tany, dia tamin'ny alalan'ny kisarisary ny soratra sy ny fitaovam-pifandraisana, taty aoriana dia nosoratana tamin'ny vato, navesatra nobataina anefa izy ireny hampitana hafatra, dia nipoitra ny soratra tamin'ny papyrus na lamba sy taratasy manokana, nampiasaina ny voromahailala (pigeon) nitondra ny hafatra, nampiasaina ny olona nanao ny asan'ny paositra.
lundi, 24 août 2020 13:19
Fantatrao ve: Inona no dikan'ny hoe norme ISO
Lasa fampiasa matetika ilay teny hoe manarapenitra, hopitaly manarapenitra, lalana manarampenitra, sekoly manarapenitra. Fenitra inona moa izany ilay arahina, sa rehefa tsara endrika ivelany dia manarapenitra izy izay. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy fenitra efa voafaritra mialoha isaky ny sehatr'asa tsirairay.Anisan'izany ny International Organization for Standardization izay mamaritra ny certification ISO. Io dia fepetra arak'asa voasoratra ary neken'ny sampandraharaha manokana antsoina organisme agréé. Ireo fenitra ireo dia vokatry ny fikarohana sy fandaminana nataon'ny organisme de normalisation ahatsara ny fomba famokarana ohatra, na ahatsara ny fomba fandraisana sy fanomezana fahafahampo ny mpanjifa.